Momba anay - Shenzhen Sparky Technology Company Limited
Mpanampy amin'ny feo
Niorina tamin'ny taona 2018, Shenzhen Sparky Technology dia manolo-tena amin'ny fianarana fifanakalozan-kevitra amin'ny milina AI, fandikan-teny marobe amin'ny fiteny marobe, fandikan-teny amin'ny fiteny maro an-tserasera ary ny rafitra fitantanana corpus parallère mifanaraka sy ny rafi-pahefana fitantanana mpampiasa.
Ny orinasa dia manana teknolojia patanty zon'ny mpamorona rindrambaiko 8, ary koa patanty modely 8 ary patanty famoronana endrika 1.
Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy, ny ekipa dia mampiasa ny haitao izay hainy hamolavolana vokatra mifandraika izay manaparitaka ny sakana amin'ny fiteny ary manatsara ny fahombiazan'ny asa amin'ny alàlan'ny fidiran'ny feo.
Ny vokatra efa misy dia:
Masinina mpandika tenim-bolo
Robot famakiana boky sary manan-tsaina
Fitaovana fampidirana feo mety amin'ny solosaina
Smart Talkie, fitaovana fampidirana feo ho an'ny telefaona finday
Ny Smart Talkie amin'ireo vokatra etsy ambony dia kely sy maivana, ary afaka mamadika mora foana ny fidiran'ny feo ho lahatsoratra amin'ny fampiharana antoko fahatelo amin'ny telefaona finday, na manova ny fidiran'ny feo ho lahatsoratra amin'ny fiteny voadika. Manatsara be ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny asan'ny olona sy ny fiainany ary mamaha ny sakana amin'ny fifandraisana eo amin'ny samy hafa firenena. Tena azo ampiharina.
Hanohy hiasa mafy izahay hanangona Corpus bebe kokoa ary hanatsara ny traikefan'ny olona amin'ny fampiasana fifandraisana amin'ny feo. Mandritra izany fotoana izany dia manohy mamokatra vokatra fifampiraharahana am-peo artifisialy bebe kokoa isika, toy ny fanekena amin'ny tenin'ny tanana, mba hanampiana ny olona moana marenina hifampiresaka amin'ny olon-tsotra.
Adiresy:RM504-506, Building A, Pingshan No.1 Rd, Shiwaitaoyuan Industrial Park, Nanshan, Shenzhen.
Vokatra mafana, Sitemap,
Taratra Led Ws2812b,